လမ်းဆုံ .....: 2010
ReadMoe “Learning Web”
Posted by Kaung Khant at 11.11.100comments Links to this post
http://www.zwani.com/ ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်ရင်
http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်....
http://chitoophoto.blogspot.com/ blog နှင့် I T နည်းပညာ
http://www.deathclock.com/index.cfm ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား....
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a...... ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း...
http://sharingtofrds.blogspot.com/ နည်းပညာ အတွက် လေ့လာရန်...
http://www.myanmarisp.com/computer_ict ကွန်ပြူတာ နဲ့ သတင်း နည်းပညာ..
http://www.vintelligence.blogspot.com/ Java အကြောင်းသိလိုသမျှ..
http://www.pcworld.com/ ကွန်ပျူတာ အကြောင်း ဘာထူးလဲ..(PC World)..
http://www.ebooksbank.com/ E-Books တွေကူးဖိူ့...
http://www.books-hive.com မြန်မာ E-books တွေ....
http://www.myanmarengineer.org အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေးဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ နေရာ..
http://www.adobetutorialz.com Adobe ရဲ့ Photoshop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေလေ့လာစရာ
www.mcpa.org.mm/ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်...
http://www.reader.google.com Google reader တဲ့ဟေ့... အသုံးပြုနည်းကိုတော့ Blog နံပါတ် 46 မှာရေးထားပါတယ်..
အသုံးလိုသူတွေအတွက် အသုံးတည့်စေမှာပါ ..
Forward Mail ကို ဆက်မျှပါတယ်
ReadMoe “Software And Web”
Posted by Kaung Khant at 20.9.100comments Links to this post
ဘာပဲလိုလို .. Files32 မှာ ရှိတယ်လို ပြောရ မလိုပါပဲ .
ရှာနိုင်ရင် အကျိုးရှိပါတယ် .. ၀င်ကြည့်လိုက်ပေါ့
Search Box ကနေ ရှာကြည့်ရင် ပိုမြန်ပါတယ် ..
ReadMoe “ရှာရှာဖွေဖွေ ဒေါင်းမယ်ဆို”
Posted by Kaung Khant at 18.9.100comments Links to this post
မြန်မာမိသားစုရဲ့ ဖိုရမ်ကဏ္ဍကို ၀င်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်
ReadMoe “မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်”
Posted by Kaung Khant at 17.9.100comments Links to this post
ReadMoe “စုံစီနဖာ ဆိုဒ်ကမ္ဘာ”
Posted by Kaung Khant at 16.9.100comments Links to this post
အီးမေးမှ တဆင့် ရရှိတဲ့ ဆိုဒ်တွေပါ
သေချာ စီစစ်ဖို့ အချိန်မရသေးတဲ့အတွက် လောလောဆယ် ဒီအတိုင်းပဲ တင်လိုက်ပါတယ်
အဆင်ပြေသလိုသာ သုံးကြပါ ..
အသစ်ရော .. အဟောင်းရော အစုံပါပဲ
1. www.myanmarengineer.org 2.www.mysteryzillion.org
3. www.myanmaritpros.com 4.www.mmitdevelopment.co.cc
5. http://forums.nativemyanmar.net 6.www.mmopenxteam.com
7. www.myanmarfamily.org 8.www.myanmarnetworknews.com
9. www.kopyaesone.co.cc 10.http://myanmarbloggersociety.ning.cm
47. http://lupyogyi.info 48.www.allchannel.com 49.www.mysuboo.com 50.http://mmblogpress.com 51.www.itworks.co.cc
74. www.myanmar-friend.ning.com 75.www.notebookofstarryprince.co.cc 76.www.thanzinhlaing.com 77.www.htm2pdf.co.uk
78. http://taryarpwagye.ning.com 79.www.myanmarlensman.com
138. http://ypp51area.yolasite.com 139.http://lettwebaw.mylovecafe.net 140.http://laytakhon.mylovecafe.net 141.www.z-thegardener.com
142. www.thuriya.org 143.www.sitandread.com 144.www.myanmars.net 145.www.w3schools.com 146.www.tulay.net 147.https://mmitdev.com 148.http://knowfree.net 149.www.shwekyunthar.com
150. www.chapterface.webs.com 151.www.englishforum.com
152. www.hinnlin.co.cc 153.www.software.moeeaintphyu.net
154. www.kothurein.co.cc 155.www.mmphotoshop.net
156. www.myanmargenius.com 157.http://koprince.isgreat.org
158. http://myanmarspace.com 159.www.padonma.com
160. www.myanmar-channel.com 161.http://mybookface.net
162. www.kkz-ratha.co.cc 163.https://ktlinn2008.wordpress.com
164. www.phoelapyae.com 165.www.loopavoidance.com
168. www.pendriveapps.com ( PortableSoftware)
http://picasaweb.google.com/109997228708896846584/BuddhaSImages?authkey=Gv1sRgCOKC_qGHoqaulgE# Buddha Images & Pagodas_1
http://picasaweb.google.com/pyaesoneaung2007/Bagoda?authkey=Gv1sRgCJb67fCE8tuNNQ# Buddha Images & Pagodas_2
http://picasaweb.google.com/109997228708896846584/TheLifeOfBuddhaAllPicture?authkey=Gv1sRgCITp0_DFpbrKCA# The Life of Buddha
http://picasaweb.google.com/109997228708896846584/BuddhaGaya?authkey=Gv1sRgCNmcrtrD_IDIGA# Buddha Gaya
http://picasaweb.google.com/pyaesoneaung2007/DropBox?authkey=Gv1sRgCOyb_rX_q5nUywE# Buddha Gaya
http://picasaweb.google.com/109997228708896846584/DhammaPoemsLKNT?authkey=Gv1sRgCIG5hsX3wYCSxQE# Dhamma Poems
http://picasaweb.google.com/109997228708896846584/UJotikaSTalks?authkey=Gv1sRgCJWcvprP2YGq_gE# U Jotika's talks
http://picasaweb.google.com/109997228708896846584/SayadawmyarSPhotos?authkey=Gv1sRgCNSWzrDOxZPL-gE# Sayadawmyar's Photos
http://picasaweb.google.com/109997228708896846584/AshinSandadhikaAshinYawainwe?authkey=Gv1sRgCNCv8qz4zvWmjAE# Ashin Sandadhika & Ashin Yawainwe
ုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်မှန်မမှန်သိရအောင် စစ်ကြည့်မယ်
http://www.tvunetworks.com/downloads/player.html World Live TV Channel ကြည့် လို့ ရပြီပေါ့
http://imtranslatorpro.ourtoolbar.com/ ဒေါင်းလွတ် ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်မှန်မမှန်သိရအောင် စစ်ကြည့်မယ်
http://www.iminent.com/category/emoticons ဗိုက်ရဒ် စကင်းများ free ဒေါင်းနိုင်သည်
3. www.learningpage.com (ဘာသာရပ်အတော်စုံပါသည်။ လူလတ်ပိုင်းများလေ့လာသင့်သည်)
4. http://www.myanmarnlp.org.mm/index.php ( အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်စမ်းသပ်ရန်အတွက် အခမဲ့ ရယူနိုင်သည်) http://www.myanmarnlp.org.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=5
10. www.universalclass.com (အွန်လိုင်းပေါ်မှ အဝေးရောက်သင်ယူနိုင်သောတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်စနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်သင်ယူနိုင်သည်)
www.psdfreebee.com (Photoshop နည်းပညာကို စလယ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများစွာဖြင့် လေ့လာနိုင်သည်)
4. www.hotmail.com (Microsoft မှ လွှင့်တင်ထားသော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
6. www.myway.com (အလှဆုံးသောပြင်ဆင်မှုများဖြင့် ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်)
7. www.dora.com (၎င်းတွင်လည်း ပြင်ဆင်ပုံအလှတစ်မျိုးနှင့် မြင်တွေ့ရရှိနိုင်သည်)
www.photoro.com ဆိုက်လည်းဓာတ်ပုံကောင်းတယ်ပြောတယ်နော်။ဟိုကိုရီးယားကား ဒိုးဒိုးဒေါက်2ဘုနှင့်ဘောက်
http://www.filehippo.com/ သင့်ကွန်ပျူတာအတွက် စုံလင်တဲ့ Free Software ဆိုဒ်ပါ
မိမိ Hack လိုသော Gmail account ကို ရိုက်ပြီး ခဏစောင့်ပါ...
http://www.mediafire.com/?nywimgmmgiz ယောကျာ်းလေးများအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်..
https://mail.google.com/mail/?ui=2&shva=1#inbox/12723274a831b5d6 တမာမြေ ဆိုဒ်http://lwinkohtet.ning.com/profile/0ubsgx2tq9ozf Lwin Ko Htet ဆိုဒ်
http://copcopcopp.ning.com/profile/0ubsgx2tq9ozf သိဘူး ဆိုဒ်
http://futuredream.ning.com/profiles/blog/list အနာဂတ် ဆိုဒ်
http://crazybag.ning.com/profiles/blog/list အရူးလွယ်အိပ် ဆိုဒ်
http://www.myanmarreader.co.cc/search/label/ ထူးဆန်းအံဖွယ် ဆိုဒ်
http://goldenmyanmarparadise.ning.com/profiles/blog/list ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် ဆိုဒ်
http://ucst-moonlight.ning.com/profiles/blog/list မြန်မာလူငယ်များ ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာနှင့် ဗဟုသုတများ
http://yayoutnantaw.ning.com/profiles/blog/list ရေအောက်နန်းတော် ဆိုဒ်
http://toiletwall.ning.com/forum/categories/2387570:Category:6586/listForCategory အိမ်သာ ဆိုဒ်
http://nattabin.ning.com/profiles/profile/emailSettings?xg_source=msg_mes_network>သရဲ တစ္ဆေ ဘုံ ဖိုရမ်
http://www.google.com/insights/search ကမ္ဘာ ပေါ်ကလုတွေ ဂူးဂဲကြီးမာ ဘာရှာသလဲကြည့် ရအောင်
http://www.labpixies.com http://www.mixpod.com http://www.blpgspot.com/ ကိုယ့်ရဲ့ ဆိုက်မာတင်မဲ့ tool လေးတွေပေါ့
www.undergroundsystems.org www.blackhat-forums.com www.phpbbhacks.com ဟက်တဲ့ဆိုက်ပါတဲ့ဝါသနာ ပါရင်ကြည့်ကြပေါ့
1. http://beemp3.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်န
ReadMoe “Websites တွေစုစည်းထားတာပါ”
Posted by Kaung Khant at 14.9.100comments Links to this post